I-Savannah: Uhlelo Lokusingathwa kwamahhala lweSoftware | Kusuka kuLinux
Savannah ngu-Sindawo yokuhlala de «Software Libre» ngokususelwa kuwebhu, okuyiphrojekthi esemthethweni ye- «Free Software Foundation (FSF)». Isebenza ngokusebenzisa isikhombimsebenzisi sewebhu, isusa isidingo sokufakwa kwanoma yiluphi uhlelo lwesoftware ngabasebenzisi (amaklayenti). Ngakho-ke ukuhlinzeka nge- indawo yokusebenzisana, esebenza kahle futhi esebenzayo, ukukhuthaza nokukhuthaza intuthuko ye- «Software Libre y Código Abierto».
Wena, phakathi kwezinye izizathu eziningi, njengamathuluzi wokuphatha amaphrojekthi kanye namazinga aphezulu wokwenza ngokwezifiso, wenze Savannah, kokuthakazelisayo Ukuphathwa kwephrojekthi kanye nohlelo lokusingathwa, ekhethwe futhi yasetshenziswa, yizinhlangano ezaziwayo emhlabeni wonke, ngezinqubo zazo zokuthuthukisa ama-software, njenge, Iphrojekthi yeCERN ye-LCG, inhloso yawo ukukwazi ukwabelana ngamandla wekhompyutha namandla okugcina kwi-Intanethi.
Savannah ihlanganise ngaphakathi kwayo ipulatifomu yewebhu, izici eziningi namamojula, njenge ukuphathwa kwe-akhawunti, ama-trackers, uhlelo lwezindaba, phakathi kokunye okuningi, kanye nezinhlelo zokusebenza zangaphandle ezahlukahlukene ezifakiwe, ukuze ikwenze kahle futhi kube namandla ngokwanele, njenge, Umthumeli weposi yokuphatha uhlu lwamakheli, kanye I-CVS / Subversion / Arch yokuphatha izilawuli zenguqulo.
Ngaphezu kwalokho, kufaka phakathi okwanele isikhala samafu, Wendawo yokulanda, amakhosombe noma ukusingathwa kwekhasi lasekhaya, wamaphrojekthi abanjiwe. Yini eyenza Savannah, omuhle kakhulu ipulatifomu yokubamba iwebhu, Kulula ukuphatha ngokusebenzisa elula «Navegador web» kusuka noma yikuphi, okwazi ukunikeza ukufinyelela kusethi ephelele ye- umsebenzi wokubambisana namathuluzi wokuphatha iphrojekthi.
1 I-Savannah: Uhlelo Lokubamba Iwebhu
1.2 Izici ezivelele
1.3 Amathuluzi afakiwe
I-Savannah: Uhlelo Lokubamba Iwebhu
Savannah Kuhloswe ukuthi kube yindawo esemqoka ekuthuthukisweni, ekugcinweni nasekuhanjisweni kwesoftware esemthethweni yenhlangano ye-GNU. Kodwa-ke, isekela amanye amaphrojekthi ahlukahlukene noma ahlobene neFree Software noMthombo Ovulekile okungeyona ingxenye yenhlangano ye-GNU, kepha ngesizinda esehlukile, esibizwa I-Savannah Ayikho i-GNU.
Iphatha amaphrojekthi wamahhala asebenza kuma-Operating Systems amahhala futhi ngaphandle kokuncika kusoftware ephathelene.
Izinsizakalo zePlatform zenziwa nge-100% yesoftware yamahhala, kufaka phakathi uqobo.
Ivumela ukubhaliswa okulula nokulula nokusingathwa kwamaphrojekthi.
UDe Mailman, umphathi weposi, usebenzisa i-interface yayo enhle kakhulu yewebhu ukuhlinzeka ngokufinyelela okulula ekuphathweni nasemisebenzini yomsebenzisi. Uhlelo lwayo lwezindaba lusekela ukwaziswa kwe-imeyili futhi lunziwa ngezifiso kakhulu, okuqinisekisa ukuthi abasebenzisi banolwazi oluthandayo, ngaphandle kokuvakashela isayithi. Izinhlobo ezahlukahlukene zama-tracker ezisetshenziswayo zenziwe ngezifiso ngokuphelele.
Izinhlelo zokulawula inguqulo
Savannah inikeza abasebenzisi ikhono lokufinyelela izinhlobo ezahlukene zabaphathi bamakhodi womthombo afakwe ohlelweni, njenge: CVS, Subversion, Arch. Futhi, ushintsho lokugcina nokuzula lunikezwa ngama-viewcvs.
Ngaphezu kwalokho, inezici ezinhle kakhulu ezihlobene nokukwazi ukulanda amafayela namaphrojekthi nge-http, kanye nekhono lokusingatha noma ukuwaxhumanisa namakhasi asekhaya wephrojekthi asemthethweni. Futhi izindawo ezinhle kakhulu zokuphathwa kwephrojekthi, ezivumela ukucushwa okusheshayo, ukulandelela imisebenzi eyabelwe nokuphatha abasebenzisi ababamba iqhaza kuyo.
"Uma uthuthukisa iphakheji esemthethweni ye-GNU sincoma ngokuqinile ukuthi usebenzise ikhosombe lokulawula ikhodi yomphakathi ku Savannah, iseva ye-GNU yokubamba. Ukuze wenze lokhu kufanele uqale dala i-akhawunti yakho bese bhalisa iphakethe lakho le-GNU. Uma usudaliwe uzokwazi ukukhetha uhlelo lokulawula inguqulo, wakhe amakhasi wewebhu wephakeji yakho, uphathe izimvume zabahlanganyeli bamakhasi neminye imisebenzi eminingi". Izinsizakusebenza Zokuthuthuka ze-GNU - Iphrojekthi ye-GNU - FSF
Sithemba ukuthi ukhona "okuncane kodwa okuwusizo" ngalokhu okuhle kakhulu «Sistema de alojamiento de Software Libre basado en la web» kubizwa «Savannah» lokho kusivumela ukusingatha intuthuko yethu noma amaphrojekthi, futhi nokusiza ngokuthuthuka kwabanye abasingethwe lapho, kuyathakazelisa kakhulu futhi kuyasiza, kuwo wonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwesimangaliso semvelo, esikhulu futhi esikhulayo sokusebenzisa kanye nokwenzelwe «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » I-Savannah: Isistimu Yokusingathwa Kwamahhala Yesoftware